प्रोस्टेट क्यान्सर चरणहरू: उनीहरू के भन्न खोज्छन्?
प्रोस्टेट क्यान्सर पत्ता लागेपछि, तपाईंको क्यान्सर मञ्चन हुनेछ. मञ्चले तपाइँलाई क्यान्सर कत्तिको उन्नत छ भन्दछ, यो प्रोस्टेट मा कती ठूलो छ, र यो शरीरको अन्य भागमा फैलिएको छ कि छैन, जस्तै नजिकको लिम्फ नोडहरू, केडीई ४%, र हड्डी.
तपाईंको क्यान्सरको अवस्था थाहा पाउँदा उत्तम उपचार विकल्पहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ, सम्भावना कि क्यान्सर निको हुन सक्छ, अथवा यो बिस्तारै बढिरहेको छ कि छैन, तपाईं सुरक्षितसाथ सक्रिय निगरानीको पछि लाग्न सक्नुहुन्छ (हेर्नुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस्), तपाईको चिकित्सक द्वारा नियमित अनुगमनको साथ.
विभिन्न मञ्च प्रणाली अवस्थित छ. तिनीहरू जटिलता र प्रयोगमा फरक-फरक हुन्छन्. सामन्यतया, चरणमा जुन तपाईको क्यान्सरको शुरुमा निदान गरिएको थियो त्यो अवस्था त्यो हो कि डाक्टरहरूले भर प्रयोग गर्छन्, क्यान्सर बढी उन्नत अवस्थामा गए पनि.
प्रोस्टेट क्यान्सर चरणहरूको दायरा बाट 1 गर्न 4
सबैभन्दा सजिलो स्टेजिङ सिस्टम समूह क्यान्सर चरणमा 1 गर्न 4, चरणसँग 1 सबैभन्दा पुरानो प्रोस्टेट क्यान्सर र चरण4जब क्यान्सर शरीरभर फैलियो. यो धेरै क्यान्सर को लागी प्रयोग गरीन्छ. तपाईंको डाक्टरले यो प्रणालीको प्रयोग गरेर तपाईलाई क्यान्सरको अवस्था बताउने छ.
स्थिति 1: प्रोस्टेट क्यान्सर प्रोस्टेटको सानो भागमा मात्र सीमित हुन्छ.
अक्सर, अर्को कारणले गर्दा तन्तुको सियो परीक्षण गर्दा क्यान्सर हुन्छ, जस्तै: सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी (बि पि एचName), विस्तारित प्रोस्टेटको रूपमा पनि चिनिन्छ, वा प्रोस्टेट विशिष्ट एन्टिजेनमा उच्च परिणामको कारणले (पीएसएName) परीक्षण, जसले संभावित क्यान्सर वृद्धिको सूचकको रूपमा पीएसए स्तर प्रयोग गर्दछ.
क्यान्सर कक्षहरू प्रोस्टेटको सानो अंशमा मात्र पाइन्छन्. कोषहरू सामान्य कोषजस्तै देखिन्छन् र प्रोस्टेटले डिजिटल मलाशय परीक्षामा सामान्य महसुस गर्छ.
PSA भन्दा सानो छ 10.
ग्लिसन प्राप्ताङ्क (तल छलफल गरियो) यो भन्दा सानो छ 6.
स्थिति 2: प्रोस्टेट क्यान्सरले प्रोस्टेटको धेरै समावेश गर्दछ र एक परीक्षामा एउटा गांठको पहिचान हुन्छ.
यस श्रेणीलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ: चरण 2A र चरण 2B.
चरणमा 2A, विशेषताहरू चरण जस्तै छन् 1, यी परिवर्तनसँग:
PSA कम से कम छ 10, तर भन्दा कम 20.
ग्लेसन प्राप्ताङ्क6वा7तर कम हुन सक्दछ यदि क्यान्सर बाहेक अन्य सर्तहरूको लागि निदान सुई बायोप्सी द्वारा भयो.
क्यान्सर एक आधा वा कम प्रोस्टेट लोब वा एक भन्दा बढी लोबमा फेला पार्न सकिन्छ.
चरण २ बी क्यान्सरको मतलब हो:
प्रोस्टेट क्यान्सर बढी विस्तृत छ, प्रोस्टेट को विपरीत पक्ष को विस्तार. यो डिजिटल रेक्टल परीक्षाको साथ पत्ता लगाउन सकिने हुन सक्छ. यस उदाहरणमा, पीएसए कुनै पनि स्तर हुन सक्छ र Gleason प्राप्ताङ्क यसबाट दायरा हुन सक्छ2गर्न 10.
वैकल्पिक रूपमा, डिजिटल रेक्टल परीक्षा र इमेजिङ परीक्षणमा क्यान्सर पत्ता लगाउनै नसकिने रहेको छ. PSA छ 20 वा धेरै र ग्लेसन प्राप्ताङ्क बीचमा छ2र 10.
यो प्रकट गर्न सक्ने अर्को तरिका ग्लिसन स्कोरसँग हो 8 अथवा धेरै, कुनै पनि स्तरमा PSA, तर इमेजिङ र DRE ले क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्दैन.
स्थिति 3: प्रोस्टेट क्यान्सर प्रोस्टेटको बाहिरी तहसम्म फैलन्छ र सेमिनल वेसिकलहरू सामेल गर्दछ. यसले स्थानीय रूपमा उन्नत क्यान्सरलाई देखाउँदछ जुन बढ्नेछ र फैलिनेछ.
PSA कुनै पनि मान हुन सक्छ र Gleason स्कोर बीच छ2र 10.
स्थिति 4: क्यान्सर सबैभन्दा उन्नत छ र रगतद्वारा फैलिरहेको छ, लिम्फ नोडहरू, र सम्भाव्य रूपमा अन्य अ .्गहरू.
क्यान्सर लिम्फ नोड वा हड्डीसम्म फैलिएको हुन सक्छ.
बारम्बार प्रोस्टेट क्यान्सर
बारम्बार हुने क्यान्सर भनेको क्यान्सर हो जुन उपचारपछि फर्कन्छ. सुरुमा पत्ता लागेको ठाउँमा वा शरीरको अन्य ठाउँमा यो फेरि आउन सक्छ. जब यो हुन्छ, सुरुमा निदान हुँदा पुरुषहरूले पनि त्यस्तै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ.
TNM स्टेजिंग: धेरै सटीक — र अधिक जटिल
क्यान्सरसम्बन्धी अमेरिकी संयुक्त समितिले अझ बढी संलग्न तर सही मञ्च विधिको समर्थन गर्छ. यस प्रणालीको सूक्ष्मताले डाक्टरहरूलाई क्यान्सरको जीवविज्ञानको आधारमा अनुसन्धान र उपचारको लागि बिरामीहरू छान्न मदत गर्छ.
TNM चरणहरू वर्गिकरण गर्नुहोस्
यसको साइज टी टीउमरCity name ("अमालेकीहरू;
लिम्फको संलग्नता एनओडेजCity name (अँ, अह;
एमअटासिस र क्यान्सर ग्रेड.
प्रणाली अलि जटिल छ र अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीद्वारा प्रदान गरिएको सार्वजनिक जानकारीमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ. (2)
जोखिम निर्धारण: जोखिम समूहहरू स्थापना गर्ने
हालका वर्षहरूमा, डाक्टरहरू र चिकित्सक समूहहरूले बिरामीहरूलाई तीन जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरिरहेका छन्: उच्च, मध्यवर्ती, र कम जोखिम. जोखिम समूहहरू टीएनएम चरणलाई विचार गर्दा आधारित छन्, पीएसएName, र ग्लेसन प्राप्ताङ्क.
कम जोखिम भएको प्रोस्टेट क्यान्सर के हो?
कम जोखिम भएको प्रोस्टेट क्यान्सर धेरै बिस्तारै बढ्छ. तपाईंको PSA भन्दा कम छ भने तपाईं कम जोखिम हुनेछ 10, तपाईँसँग ग्लेसन प्राप्ताङ्क भन्दा उच्च छैन 6, र T1 र T2A बीचको T चरण. कम जोखिम भएका बिरामीहरूले सक्रिय निगरानीका लागि उम्मेदवारहरूलाई विचार गरेका छन्, कट्टरपन्थी प्रोस्टेटाटोमी, वा विकिरण.
मध्यवर्ती के हो- वा मध्यम जोखिम भएको क्यान्सर?
मध्यम जोखिम क्यान्सर सम्भवतः केहि बर्ष बढ्न वा फैलिंदैन, तर उपचारात्मक उपचार (प्रोस्टेटकटोमी वा विकिरण) सिफारिस गरिएको छ. साथै, तिनीहरूलाई अक्सर गोनाडोट्रोपिन निष्कासन गर्ने हर्मोन औषधीको छ महिना पनि नबित्दै उपचार गरिन्छ (हर्मोन थेरापी). तपाईंको बीचमा पीएसए छ भने तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई यो श्रेणीमा राख्नेछन् 10 र 20, को एक Gleason स्कोर 7, र T2B को एक टी चरण.
उच्च जोखिम क्यान्सरहरू के हुन्?
उच्च जोखिम भएको क्यान्सरको अर्थ आगामी केही वर्षमा तपाईंको क्यान्सर बढ्ने र फैलिने आशा गरिन्छ. यदि तपाईँसँग PSA भन्दा ठूलो छ भने 20, एउटा ग्लेसन बीचको प्राप्ताङ्क 8 र 10, र T2B को एक टी चरण, तपाईंलाई उच्च जोखिम मानिनेछ. उच्च जोखिममा परेका पुरुषहरूलाई अक्सर विकिरण र लामो समयसम्म हर्मोनल थेरापी दिइन्छ. उच्च जोखिम भएका बिरामीहरूको राम्रो उपचार विकास गर्नु प्रोस्टेट क्यान्सर अनुसन्धानको प्रमुख लक्ष्य हो. (2)
प्रोस्टेट क्यान्सर जीवविज्ञान मा इनरोड्स को नयाँ आणविक परीक्षण गर्न को लागी आएको छ, जब जोखिम समूहहरूसँग विचार गरिन्छ, ग्लिसन प्राप्ताङ्क, र पीएसए, ट्यूमरको आक्रामकताका बारे जानकारी दिन सक्छ. सक्रिय निगरानी रोज्न चाहने पुरुषहरूमा आणविक परीक्षण सिफारिस गरिन्छ, कम जोखिम छ, वा अधिकको जीवन प्रत्याशाको साथ मध्यवर्ती-जोखिम रोग 10 बर्ष वा जो को उन्नत रोग छ.
अघिल्लोके कारण Sciatic तंत्रिका दुखाई हुन्छ
अर्कोबेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासियाको बारेमा केहि चीजहरू (बि पि एचName)